Daawo: Wasiir diini oo kormeer ku tagay xero ay imaaraadka carabta muqdisho uga dhiseyso ciidamada…. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Wasiir diini oo kormeer ku tagay xero ay imaaraadka carabta muqdisho uga dhiseyso ciidamada….
by Tifaftiraha K24 8th March 2017 037
Sii-hayaha Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa maanta kormeer howlleed ku tagay xerada Ciidanka ee Damaayo oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Xerada ayaa waxaa dhisme xoogan oo dib loogu howlgalinayo ka wada Dawladda Isutagga Imaaraadka Carabta.
Wasiir Diini ayaa markii uu xerada tegay waxa uu kormeer ku sameeyay qeybaha ay ka koobantahay xerada dhismaha uu ka socda oo xilligaasi ay ka soconayeen howlo lagu dhisayo xerada qeybaheeda kala duwan.
“Waxaan ka shaqaynaynaa kor u qaadista tayada iyo tababarka Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, si cadowga looga guuleysto, hadda waxaa dhisme ku socdaa xarumo badan oo leeyihiin ciidanka Xoogga si loo gaaro hadafka fog iyo mid dhexe ee lagu doonayo horumarinta qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan dhismaha ciidanka oo muhim u ah soo kabashada dalkeena”. Ayuu yiri Wasiir Diini.
Dhageyso: 8-da march oo soomaliya qeybo kamid ah laga xusaayo marwada madaxweyne farmaajo oo…
War cusub: Ciidamada dowlada federaalka oo faarujiyay deegaan istaraatiiji ah kadib markii ay….
Gudiga Aaska Qaran iyo Qoyskii Marxuun Sh Maxamed Aw-Libaax oo u mahad celiyay Madaxda Qaranka iyo…
admin 24th June 2017 24th June 2017
Raisalwasaare Abdiweli oo Diyaarad qaas ah u diraya dhawacii ka dhashay qaraxi Baydhabo
Siyaasiga Cali Xaaji Warsame Oo si Layaab leh Fariin Ugu Diray Farmaajo”Mucaaradka Dowladana Ku Tilmaamay…!!